Ogaden News Agency (ONA) – Haya’adda Daryeelka Agoonta iyo Naafada GA – Agoonteenii yaa u maqan?
Haya’adda Daryeelka Agoonta iyo Naafada GA – Agoonteenii yaa u maqan?
Posted by ONA Admin	/ April 24, 2012
Hayadda Daryeelka Agoonta iyo Naafada Geeska Afrika – HORN OF AFRICA ORPHAN AND HANDICAP RELIEF ORGANIZATION- waa hay’ad ka diwaan gashan wadanka Kenya oo sharciga ay ku dhaq-dhaqaaqdo haya’adda u soo saartey.
Hay’ada waxaa si joogta ah uga shaqeeya dalka Kenya dhexdiisa 6 ruux, waxayna leedahay wakiilo caalamka u jooga. Gudoomiyaha hay’adu waa Dr. C/raxmaan Dheere, Xoghaye Guud waxaa ka ah Axmed Xuseen Axmed. Hay’ada waxaa la aasaasay 2010 kii. Hay’ada wuxuu hadafkeeda koobaad yahay Agoonta iyo Naafada Geeska Africa sida magaceda ku xusan, hadafka labaad ee Haya’ada waa dhamaan gargaarka baahanayaasha Geeska Africa intii kolba la awoodo.
Wax qabadka Hay’ada
Hay’adu waxay dhistay ilaa hadda 3 dugsi iyo madaraso isku jirta oo ah waxa loo yaqaano INTEGRATED ACADEMY SCHOOL oo ku kala yaala sadexda xero qaxoonti ee DADAAB REFUGEE CAMP IN KENYA. Waxaa wax ka barta dugsiyadaa in ka badan 500 oo arday, waxaa wax ka dhiga macalimiin gaadhaysa 27 macalin. Maadooyinka lagu barto waxay isugu jiraan maadooyinka lagu qaato
Kenya primary system iyo maadooyinka lagu qaato madaarista dalka Kenya ee ku salaysan barashada Diinta ISLAAMKA, kuwaas oo markii la isku daro la isku yidhaahdo INTEGRATED.
Waxaa kale oo ay hay’adu gacanta ku haysaa Agoonta reer Ogadeniya oo tirada hada nasoo gaadhay ay dhantahay 3184 Agoon ah, kuwaasoo isugu jira qaar dalka Kenya ku sugan hadda iyo kuwa jooga dalalka dariska ah sida; Eritrea, Djibouti, Somalia iyo Uganda. intooda badana Agoonta diiwaan gashan waxay joogaan gudaha Ogadeniya. Waxaa kale oo jira kuwa aanu ku magacawno Agoon u yaal oo macnaheedu yahay aabihii oo la xidhay ama la waayay oo aan geeridiisa la xaqiijin. Waxaa kale oo aanu iyana gacanta ku haynaa haweenka laga shihiiday iyaga oo aan wali waxba dhalin iyo sidoo kale kuwa iyagana lasoo fara-xumeeyay ama lasoo jidh dilay.
Dakhliga ay Hay’adu hesho
Dakhliga ugu badan ee hay’ada soo gala wuxuu ka yimaadaa tabarucaadka ay soo uruuriyaan wakiilada hay’ada u jooga wadamada dibada ah, dhaqaalahaas oo intiisa ugu badan laga soo uruuriyo dadka reer Ogadeniya iyo xoogaa aan badnayn oo ay dad muslimiin muxsiniin ahi ay ku tabarucaan. Hay’adu waxay sanadkii 2011 kii ka qaybisay xeryaha qaxoontiga gargaar isugu jira Lacag cadaan ah iyo alaab iyo raashin
waxayna u qaybisay qoysas gaadhaya 900 oo qoys, dadkaas oo ah baahanayaal ku noolaa xeryaha qaxoontiga dalka Kenya iyo dalalka dariska ahba. Hay’adu waxay wakiilo ku leedahay 5 ta qaaradood ee aduunka kuwaas oo la odhan karo ALLAH mahadii waa kuwa suurto galiyay in ay hay’adu soo gaadho horumarkaas ay maanta tabarucaadka intaas le’eg bixinayso. Waxa kale oo iyana hay’adu kafaalo qaad (Sponsorship) u heshay Agoon gaadhaysa 18 qoys oo kamid ah Agoonta reer Ogadeniya ee ku sugan dalkan Kenya oo tiradoodu dhan tahay 212 Agoon.
Codsi iyo Gabagabo
Maadama ay hay’adu soo qabatay shaqooyin fara badan iyadoo ku shaqaynaysa halku-dhigii ahaa Isku-Tashi, oo aanay wax gacan qabad ah ka helin dalka ay joogto Haya’adda ee Kenya iyo ururada samafalka caalamka toona, waxaa ka codsanaynaa dhamaan dadka ehelka u ah Agoontaa iyo dadweynaha kalee ku dhibaataysan Xeryaha Qaxootiga inay gargaar dagdag ah u fidiyaan Haya’adda una raadiyaan hay’ado caalami ah oo taageera iyo dadka muxsiniinta ah (Philanthropists) ee dalalkaa ku nool.
Haya’dda waxay haysaa mashaariic badan oo –Waqf- ahaan looga dhigi karo agoonta iyo xaasaska u baahan daryeelka say isugu filnaadaan oy uga baxaan gacan taaga.
Wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad nagala soo xidhidhaan telefonada kala; +254700424111 or +254723625215.
Jaaliyaddii u baahata inay Haya’adda u timaado si sharxaad dheeraad ah looga siiyo mashaariicda ay fuliso Haya’adda ama ay Haya’adda ugala qayb-qaadato hawlaha tabarucaad ururinta ah way soo dhaweynaysaa Haya’adda.
Fiiro Gaar ah : waxay Hayadda Daryeelka Agoonta iyo Naafada Geeska Afrika ku dhawaaqi doontaa maalin loogu magacdaray –Maalinta Agoonta Ogadenya (Ogaden Orphan Day) oo laga xussi doono daafaha caalamka si loo xasuusto agoonteena.